Ihuenyo mmetụ ihu nwa, vidiyo na imewe iji chịkwaa nwa gị | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Gaton | | Ngwa, Nyocha
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha nke Touch Screen nwa ileba anya, otu n'ime ngwaahịa ọhụrụ nke ndị France na - emepụta Babymoov nke na - enyere anyị aka ọrụ ike oge niile lekọta ụmụ-ntakịrị anyị mgbe ha na-arahụ ụra.
Dị ka ị pụrụ ịhụ na onyonyo dị n'elu, ihe Ihuenyo mmetụ aka bụ ngwaahịa na-ejikọ na otu ngwaọrụ teknụzụ kachasị ọhụrụ na nlele ụmụ (mgbasa ozi vidiyo, ihuenyo mmetụ, ọrụ VOX, ...) yana dị mma n'anya ma dị ọcha nke ahụ ga-eme ka ọ dabara nke ọma n’ihe ịchọ mma nke ụlọ anyị.
1 3,5 inch ihuenyo mmetụ
2 Touch Screen nwa nyochaa functionalities
3 Nnwere onwe na oke
4 Foto osisi
5 Video nke nwa ileba anya na-arụ ọrụ
6 Ebee ka ịzụta nwa nyocha?
8 Ihe maka na imegide
3,5 inch ihuenyo mmetụ
Ihuenyo mmetụ ihu nyochaa nwa
Ihe mbu nke na-adọta nlebara anya nke nlekota nwa a bu ihe di egwu 3,5 inch ihuenyo mmetụ na-enye gị ohere ma rụọ ọrụ dum ngwaọrụ nakwa dị ka na-enwe ike ịhụ na nnukwu idoanya na video foto nke nwa gị. E nwere ọtụtụ ụdị nke na-enye vidiyo mana obi abụọ adịghị ya na ogo nke Touch Screen bụ nke kachasị mma anyị hụrụla n'ahịa.
Ihuenyo bụ nyere ndị isi ihe ngosi inwe ike iji ngwa ngwa na nkasi obi hụ nhọrọ ndị arụ ọrụ, ọnọdụ nke batrị akụrụngwa, ọnọdụ ihu igwe, ogo nke akara natara, wdg.
Modeldị anyị nwalere nwere naanị otu igwefoto, mana Touch Screen nwere ike ịrụ ọrụ ruo igwefoto 4 n'otu oge, nke mere na ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ụmụaka ị nwere ike ịzụta naanị ese foto iche iche ma jikwaa ha niile site na otu ihuenyo mmetụ. Ojiji ya dị nnọọ mfe, ebe ọ bụ na e kewara ihuenyo na mpaghara 4 na nke ọ bụla n'ime anyị na-enweta onyinyo nke nwatakịrị.
Touch Screen nwa nyochaa functionalities
Baby nyochaa igwefoto
Dị ka anyị kwuru na mmalite nke nyocha ahụ, Touch Screen ọ bụ ngwaahịa nke teknụzụ kachasị ọhụrụ nke na-enye ọrụ kachasị ọhụrụ maka usoro nyocha maka ụmụ ọhụrụ dịka:
Ọrụ nke ntinye olu VOX
na-enye ohere Ndekọ vidiyo na ịse foto (Ọrụ abụọ ahụ chọrọ kaadị microSD nke na-esonyeghị na ngwaahịa ahụ).
akpaka abalị / ụbọchị ọhụụ
akara ngosi na mkpu, bara ezigbo uru iji chịkwaa ndapụta na mberede ma ọ bụ ịrị elu na ọnọdụ okpomọkụ nke nwere ike imetụta ogo ụra nwa ahụ
mode Walkie-talkie nke mere na ndị nne na nna nwere ike ịgwa nwa ọhụrụ okwu ozugbo wee mesighachi ya obi ike na-enweghị ịbanye n'ime ụlọ ya.
ike egwu ruo 3 dị iche iche lullabies nke ahụ ga - enyere gị aka imesi nwa gị obi ike n’ụbọchị ndị ahụ ọ na - esiri ha ike ihi ụra.
programmable ngagharị detector, ka anyị nwee ike ịgbalite ma kwụsị ya dịka ọ dị mkpa.
Nnwere onwe na oke
Igwefoto ngwaọrụ ahụ nwere ike site na nkwụnye ọkụ ma ọ nweghị batrị n'ime, nke nwere ike ịbụ mmachi mgbe ị na-etinye igwefoto ahụ site na ntanetị. Maka akụkụ ya, onye natara nwere batrị lithium na-agbanye ọkụ nke na-enye nnwere onwe dị ezigbo mma.
Na ọkwa dị iche iche, dịka ngwaọrụ vidiyo niile usoro ihe omumu ya kariri ihe ndi ozo ochie na naanị na-arụ ọrụ na ọdịyo. N'ihe banyere ihuenyo mmetụ aka, ọkwa gọọmentị nyere site na ika ahụ bụ mita 250 n'ọhịa, ọ bụ ezie na dịka ule anyị na mgbidi na mgbochi ndị ọzọ, ọ belatara nke ukwuu ruo naanị 50-60 mita kachasị.
Video nke nwa ileba anya na-arụ ọrụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe niile ihe nlele nwa a nwere ike ịnye gị, ebe a ka anyị hapụrụ gị vidiyo vidiyo nke ika ahụ ka ị wee hụ ya n'ọrụ.
Ebee ka ịzụta nwa nyocha?
Nwere ike ịzụta Touch Screen maka ọnụahịa nke € 217 na Amazon site na ịpị ebe a. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta igwefoto ọzọ ị nwere ike nweta ya maka naanị € 55 site na ịpị ebe a.
Touch Screen nwa ileba anya
Ihe maka na imegide
Dị nnọọ nkwafu imewe
Obere dị nso na mgbidi
Igwefoto na-enweghị nhọrọ batrị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ihuenyo mmetụ ihu nwa, vidiyo na imewe iji chịkwaa nwa gị
A na-edozi ihe oyiyi ọhụrụ nke LG na-esote LG V20